Ihe ngosi |
Anyị gara 2020 ISE, Netherlands
Emere ISE 2020 na Amsterdam site na February 11 ruo 14. Dị ka ihe ngosi kachasị ọkachamara na Europe maka akụrụngwa na-ege ntị na teknụzụ njikọ usoro ozi (nke akpọrọ ISE), ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ụlọ ọrụ ọkachamara kachasị nwee ọganihu na nke kachasị ukwuu- nnukwu ihe ngosi na Europe.
ISE bụ ihe ngosi kwa afọ, nke Infocomm mba ụwa na-eme, na RAI Amsterdam, Netherlands.
Companylọ ọrụ anyị gosipụtara kọmpụta ederede LCD nwere njiri ọhụụ, akụkụ na-ekesa na nnyefe & ọrụ nchekwa, ọtụtụ ndị na-egbochi ndị ọzọ na-ekwupụta nke ọma maka ngwaahịa anyị, nke dọtakwara ọtụtụ ndị na-eme ngosi ndị mere All-In-One Touch Screens ka ha nwee ahụmịhe na mkparịta ụka ọnụ.
Ihe ngosi nke Ulo akwukwo nke iri asaa na asaa na Qingdao
Abstract: Emere Ngosipụta Nkụzi Ego nke 77 na Qingdao International Exhibition Center na 12th, Ọktọba, 2019. Ọhụụ bọọdụ LCD blackmark, solution klas mara mma na PC niile nwere otu dọtara ọtụtụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ.
Ọ maara na China Educational Equipment Ngosi bụ kasị ikpo okwu maka ngosi na nkwukọrịta, na bikon nke ahịa dị ka mma. LONBEST LCD blackboard nwetara ọhụụ ọhụrụ site na igodo ya otu ihichapụ, ihichapụ nke ọma, nnyefe mmekọrịta na ọrụ nchekwa. Ihe ahia ohuru a nwetara amara site n’aka ndi nkesa, ndi nkuzi, ndi nne na ndi oru ulo akwukwo.
LONBEST LCD Blackboard gosipụtara na World DIDAC ASIA
Site na Ọktoba 9-11, 2019, World DIDAC Asia ka akwadoro na Bangkok, Thailand. N'ime afọ iri gara aga, ihe ngosi ahụ ghọrọ ihe ngosi dị egwu maka ụlọ ọrụ enyemaka nkuzi na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Ọ bụ ama maka ndị na-ege ya ntị ọkachamara na ịdị mma dị elu. O nwere ezigbo aha n’etiti ndị na-egosi China. A na-eme ihe ngosi ahụ kwa afọ ma ọ bụ nnukwu ikpo okwu dị mkpa maka ụlọ ọrụ iji mepee ahịa Thai.
Anyị sooro onye anyị na ya so nwee nkwekọrịta nkwado - Starcast iji jikọọ aka wee mee atụmatụ ma gaa ihe ngosi ahụ, na-elekwasị anya na bọọdụ LCD, iji mepụta atụmatụ izi ihe. Ọ dọtara ọtụtụ ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị nkuzi ka ha hụ ya. Echiche ya na-enweghị ntụ na gburugburu ebe obibi maka ahụike, na-edebe ahụmịhe ederede mbụ, ndị isi na ndị nkuzi ghọtara nke ọma, ma nyekwa ọtụtụ ndụmọdụ bara uru.
Anyị na-adọtakwara ndị ngosi si France, South Korea na Spain, ndị na-ekwukwa okwu ọma banyere ngwaahịa anyị. N'ime ha, ndị ihe ngosi French na South Korea kwupụtara n'ụzọ doro anya na ha ga-egosi ngwaahịa anyị na ihe ngosi ụlọ akwụkwọ French na ọnwa na-abịa, na-ebute nkwonkwo ụzọ.
Mmụta IT Solutions Expo, EDIX, Tokyo
E mere Nkparịta ụka IT Solution Expo na June 19-21, 2019, na Tokyo, EDIX bụ ngosipụta kachasị ukwuu ma nwee mmetụta maka akụrụngwa mmụta na Japan, ọ bụ ezigbo ohere iji kwalite maka mkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ, iwebata ngwaahịa na ọrụ ọhụrụ. .
A kpọrọ anyị ka anyị bịa gosipụta ihe ngosi a, anyị gosipụtara ngwaahịa ọhụrụ anyị - bọọdụ ederede LCD, njirimara ọhụrụ: enweghị ntụ, enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke dị ọcha, nlele anya, eco-friendly, wdg. ndị ahịa.
Ọtụtụ ndị nkesa nwere mmasị na bọọdụ ide LCD, ha nwere nchekwube maka atụmanya ahịa.
Ihe ngosi nke Ulo akwukwo 76th na Chongqing
Abstract: Azọrọ bọọlụ LONBEST LCD dịka "Award Golden Award Product" na Ngosipụta Nkụzi Ego 76th (26th - 28th, April, 2019) ma nwee ọ popularityụ dị ukwuu n'etiti ndị ahịa.
Ihe nchoputa banyere eleghi anya nke ndi ntorobia nke ndi National Health Commission gosiputara na enweghi uche nke ndi ntorobia bu 53,6% na 2018. Ndi nne na nna, ulo akwukwo na ndi mmadu ejiriwo ihe omuma nke ohuru. N'okwu a, ngwaahịa "nlekọta anya" bụ ihe a ma ama, edepụtara bọọdụ LONBEST LCD n'etiti ha.
Ọ bụghị otu ihe ngosi LCD, LONBEST LCD blackboard na-agbado teknụzụ na-enweghị azụ iji gosipụta ederede aka site na ọkụ eke. Ngwurugwu na-enweghị ntụpọ, radieshon, enweghị mkpa chalks / akara /, nlekọta anya, akụkụ elele bụ uru dị na bọọdụ ndị ọzọ. Ihe dị ka ndị nkesa mpaghara 30 sitere na China ghọrọ ndị mmekọ nke LONBEST.
A kpọrọ LONBEST ka ọ bịa Nnọpụta Ihe Nkụzi Egwuregwu Beijing nke 30
Abstract: Ego emere ihe ngosi ihe omumu ihe omumu ihe omumu nke 30 na Beijing na National Assembly site na 6th - 8th, March, 2019.
LONBEST raara onwe ya nye maka nyocha na mmepe nke bọọdụ LCD maka ọtụtụ afọ. Ebe ọ bụ na imepụta ihe na-aga nke ọma nke otu igodo nhichapụ LCD na afọ gara aga, LONBEST enwetala ihichapu ọrụ iji melite ahụmịhe ederede. Dika bọọdụ LCDB nke nwere oghere pụrụ iche na-azụ ahịa n'ahịa ụwa, ọ dọtara ọtụtụ ndị mmekọ na ndị otu LONBEST.
Ntuliaka Ulo Egwu Egwu 2019 HONGKONG